Iskuullada Hore ee Colorado Castle Rock (CECCR) waxay albaabada u fureen sannadka 2020 iyada oo ah lacag-la’aan, isdiiwaangalinta furan ee isdiiwaangalinta dadweynaha. Dugsi sare oo yar ahaan, CECCR waxay bixisaa jawi shaqsiyeed iyo mid taageero leh oo ay ardaydu awood u leeyihiin inay ku daba galaan himilooyinkooda waxbarasho iyo shaqsiyeed ee gaarka ah iyo kuwa gaarka ah. Sida dugsiga sare ee kulleejada hore, barnaamijka tacliimeed ee CECCR waxaa loogu talagalay inuu u oggolaado ardayda dhammeeya manhajka si ay u kasbadaan shahaadada wadajirka ah, 60 + saacadaha amaahda kulliyadda, iyo / ama shahaadooyinka warshadaha iyada oo aan kharash looga qaadin qoysaska.
Colorado Early Colleges Castle Rock waxay ardayda fasalada 9aad-12aad siisaa fursad ay ku bilaabaan ka shaqeynta koorsooyinka heerka kuleejka sida ugu dhakhsaha badan markay diyaar u yihiin kuliyada CECCR waxay qiimeysaa arday kasta oo isdiiwaangaliya lana kulma ardayda meesha ay joogaan, heerkuu doono ha noqdee. Ardayda CECCR waxay kasbadaan isku darka dhibcaha dugsiga sare iyo kuleejka markay raadinayaan dibloomada dugsiga sare iyo shahaadada Associate ama ka sare.
Hoggaamintayada, Ogolaanshaha, Talo-siinta, iyo Kooxaha tacliinta ee CECCR waxay aqoonsan yihiin mas'uuliyadda naloo aaminay ee ah inaan gaarsiino saameyn togan oo cimri dheer ardaydeena iyo qoysaskooda, tacliin ahaan iyo nolol ahaanba. Xubin kastaa way fahamsan tahay oo ay wadaageysaa fulinta Bayaanka Howlgalka CEC iyadoo la adeegsanayo ilo kasta oo suurtagal ah iyo in la dhiso beel xoog leh oo kaamil ah oo ay ka buuxaan sharaf isla markaana ay horseed u tahay heer sare.
Kooxda Maamulka CEC Castle Rock
Keshia Medellin - Dean Tacliin - View Profile
Alyssa Friscic - Macallinka Xisaabta - View Profile
Maren Blind - Lataliyaha Tacliinta & Shaqada - View Profile
Leaman Boyd - Macallinka ESS - View Profile
Ryan King - Macallinka Sayniska - View Profile
Trish Leichty - Macallin Saynis - View Profile
James Rybolt - Macallinka Sayniska - View Profile